Factory fanamafisam-peo | Mpanamboatra sy mpamatsy Sterilisation China
Fitaovana fanariana gazy EO
Amin'ny alàlan'ny catalytic amin'ny mari-pana avo lenta, ny masinina fitsaboana etylene oxide dia afaka mamoaka ny entona EO ho lasa gazy karbonika sy etona rano ary avoaka mivantana mankany ivelany, fa tsy mila mametraka fantsom-pivoahana avo lenta. Ny fahombiazan'ny famotahana dia avo kokoa noho ny 99,9%, izay mampihena be ny famoahana éthiléthide oxide.
XG2.C series sterilizer dia maka entona «éthilène oxide (EO) 100% ho mpanelanelana amin'ny sterilization. Ampiasaina indrindra hanaovana sterilization ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana marina, zavamaneno optique, ary fitaovana elektronika ara-pahasalamana, plastika sy fitaovana ara-pitsaboana izay tsy mahazaka hafanana ambony sy fanamainana mando.
Steriliseran'ny plasma hidrozenina peroxyde
SHINVA Plasma sterilizer dia mandray ny H202 ho toy ny mpamatsy entana ary mamorona toetoetran'ny H202 amin'ny alàlan'ny saha elektromagnetika eo ambanin'ny maripana ambany. Izy io dia manambatra ny H202 misy gaza sy plasmatika mba hanaovana sterilization ho an'ireo entana ao an-trano ary lo ny H202 sisa tavela aorian'ny fanamainana.